Rag badani kuma fiyooba sinnaan-la’aanta ragga iyo dumarka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Mary Chitgar / P4 Skaraborg Sveriges Radio
Rag badani kuma fiyooba sinnaan-la’aanta ragga iyo dumarka
La daabacay tisdag 9 april 2013 kl 17.10
Qoraal cilmi-baaris ah oo lagu sameeyey jaamicadda Umeå ayaa lagu muujiyey in ragga ku nool xiriirka aan sinnaanta ku dhisnayn aysan fiyoobeyn maskax ahaan maadaama ay guriga ka qabtaan hawlo ka yar kuwa ay qabtaan dadka ay la nool yihiin.
Cilmi-baaristu waxay ku salaysan ilaa 1 000 oo noloshooda lala socday ilaa sannadkii 1981, kolkaas oo ay dadkaas da’doodu ahayd 16 sano. Waxaana laga helay sawir aan cusbeyn maadaama ay weli sinnaan-la’aani ka dhex jirto qoysaska iswiidhishka. Waxaa intaas dheer in dadka ku nool xiriirka aan sinnaanta lahayn ay maskax ahaan ka liitaan kuwa ku nool qoysaska ay sinnaantu ka jirto..
Dumarku waxay dhib ka sheegtaan culeyska hawlaha ay dibedda ka qabtaan halka raggu fiyoobi-la’aan ka qaado in aysan ka soo dhalaalin sidii laga sugaayey. Sidaas waxaa sheegtay Lisa Harryson oo soo diyaarisay cilmi-baaristaan.
- Waxaa laga yaabaa in aad jeceshahay ama qoyska jecel yahay in aad guriga wax badan ka qabato. Waxaana dhici karta in aad dooneyso in aad wax badan guriga ka qabato, laakiin aysan kuu suurtagelin sababo kala duwan oo uu ka mid yahay culays xagga maskaxda agood.